ရေဘောလုံးအဆို့ရှင် China Manufacturers & Suppliers & Factory
ရေဘောလုံးအဆို့ရှင် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
(4များအတွက်စုစုပေါင်း ရေဘောလုံးအဆို့ရှင် ထုတ်ကုန်များ)
ကြေးဝါရေ Ball ကိုအဆို့ရှင်
ဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8602 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Non-Standard ဆိပ်ကမ်း, F / F နီကယ်ပြား အရွယ်အစား - ၁/၄ မှ ၂၁ / ၂ သို့€သို့ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
သံမဏိလီဗာသည်ကြေးဝါရေ Ball Valve ကိုကိုင်တွယ်ပါ
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8614 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Non-Standard ဆိပ်ကမ်း, F / F နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 / မှ 2â€ ?? To1â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8615 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Non-Standard ဆိပ်ကမ်း, F / F နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 / မှ €4â€To4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
လက်စွဲစာအုပ်ကြေးဝါရေ Ball ကိုအဆို့ရှင်
ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် ART.8618 ကြေးဝါဘောလုံးအဆို့ရှင် Non-Standard ဆိပ်ကမ်း, F / F နီကယ်ပြား အရွယ်အစား: 1 / မှ €4â€To4â€ ?? အင်္ဂါရပ်များ: အပြည့်အဝထွင်းဖေါက်နှင့်အတူ 1. Ball ကိုအဆို့ရှင်။ UNE-EN 12165 နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု။ 3. ANP / ASME B 1.20.1 အရ NPT သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အဆုံးဖြစ်သည်။ 4....
H teide ထောင့်အဆို့ရှင်
Gate အဆို့ရှင် FORGING
ရေဘောလုံးအဆို့ရှင် ဘောလုံးအဆို့ရှင် အတုဘောလုံးအဆို့ရှင် ပွတ်ဘောလုံးအဆို့ရှင် ဘောလုံးအဆို့ရှင် Thread ရေအတွက်ဘောလုံးအဆို့ရှင် အသေးစားဘောလုံးအဆို့ရှင် လိပ်ပြာဘောလုံးအဆို့ရှင်